स्वास्थ्य जिबन शैली Archives - Online Palanchok
आँखा माथिको आँखी भौ पातलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? कसरी बाग्लो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस केहि दिनमै लामो र बाक्लो हुन्छ ! (भिडियो सहित)
भिडियो, स्वास्थ्य जिबन शैली
सुन्दर बन्नको लागि शरीर मात्रै राम्रो भएर हुदैन । शरीरका विभिन्न अङ्गहरु पनि उत्तिकै राम्रो हुनु पर्छ अथवा बनाउनु पर्दछ । बिशेष गरि महिलाले आफ्नो शरीरको सजावटमा सधै ख्याल गर्ने गर्दछन । अनुहार,हात,खुट्टा कपाल देखि सानो सानो कुराहरुमा निकै ख्याल गर्ने गर्दछन । त्यस्तै महिलाहरुले बनाउने आइ’ब्रो’/आँखी भौ चिटिक्क राम्रो बनाएका हुन्छन जसले गर्दा सुन्दर झन् थपिएर सुन्दरी देखिन्छन । तर कसैको भने पातलो राम्रोसंग नचिन्ने साना-साना रौ मात्रै हुन्छन जसले गर्दा महिलाहरु अन्य कालो बस्तु लगाएर आँखी भौ देखाउछन । बिशेष गरेर मंगोलियन अनुहारका युवतीहरुमा आँखी भौ पातलो र थोरै मात्रामा मात्रै हुन्छ । यसलाई कसरी बाग्लो बनाउने भनेर सोचाईमा हुनुहुन्छ । हेर्नुहोस यो भिडियो:
पेटमा बोसो बढ्यो ? केही दिनमै घटाउन दैनिक खानुहोस् यी ५ कुरा
काठमाडौ । धेरै मानिसको पेट मात्र बढेर अस्वाईदिलो ज्यान देखिएको हुन्छ । पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् । काँक्रो बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् । यो पेटका लागि धेरै लाभदायी छ । यो सेवनका कारण धेरै खाना खानबाट जोगिन सकिन्छ नै, यसले पेटको झाडुको काम पनि गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै बोसो कम हुन्छ । धनियाँको जुस यसमा क्यालोरी निकै कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ। एलोभेरा जुस एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा पेटको बो
यी हुन् ३ पटकको प्रयोगमै दाग हटाई छालालाई चम्किलो बनाउने सरल उपाय
एजेन्सी । आजभोली छालालाई सुन्दर तथा आर्कषक बनाउने विभिन्न किसीमका सौन्दर्य प्रशाधनहरु पाईन्छ। जस्मा विभिन्न रसायनहरु मिसाईएको हुन्छ। जसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ। आज हामी तपाईंलाई प्राकृतिक उपायबारे जानकारी दिन्छौं। यसको लागि तपाईंले २ वटा उपायलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। १) आलु र कागतीको प्रयोग आवश्यक सामाग्रीहरु १) १ वटा आलु २) १/२ कागतीको रस बनाउने विधि सबैभन्दा पहिला काँचो आलुलाई ब्लेन्डरमा हालेर पिस्नुहोस । त्यसपछि यसलाई कागतीको रससंग मिसाउनुहोस् । यस मिश्रणलाई गोलाकार रुपमा अनुहारमा लगाई २० मिनेटसम्म त्यसै छोड्नुहोस् । र सफा पानीले मुख धुनुहोस् । २) आलु र काँक्रोको प्रयोग १) १ वटा आलु २) १/२ काँक्रो बनाउने विधि सबैभन्दा पहिला काँचो आलु र काँक्रोलाई एउटा ब्लेन्डरमा हालेर पिस्नुहोस् । त्यसपछि मिश्रणलाई गोलाकार रुपमा अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसलाई २५ मिने
दाँत हरेक जीवहरुको निम्ति अत्यावश्यक छ ।तर मानिसलाई दाँत केवल कुनै चिज चपाउन मात्र होईन सौन्दर्य बढाउने एक माध्यमको रुपमा पनि पर्न आउँछ । तपाईहरु मध्य कतिपयलाई दाँत दिनहुँ सफा गर्ने गरेको तर कहिल्लै सेतो नदेखिने या दाँत पहेंलोनै देखिने गरेको छ भने यस्ता विधिहरु अपनाएर दाँतलाई सफा र सुन्दर राख्न सकिन्छ । हाम्रो गाउघर तिर नुन र तेल ले दाँत सफा गर्ने चलन अझै पनि छ, नुन मा २(४ थोपा शुद्ध तोरीको तेल मिलाएर दांत सफा गर्ने गर्नाले केहि दिनमै दाँतको पहेलोपना हटेर जान्छ । केरालाइ पिसेर यसको पेष्ट बनाउनु होस् यसको पेष्टले दांतलाइ दिनहु एक मिनेट मसाज गर्नुहोस, मसाज पछि दांत ब्रश गर्नुहोस र यो उपाए दिनहु गर्नाले दाँतको पहेलोपन हटेर जान्छ चुरोटको सेबन गर्ने गर्नाले पनि दांत पहेलो हुन्छ भने कुनै खानेकुरा लगातार खानाले, उमेर बढ्दै जाँदा अनि धेरै औषधिको सेवन गर्नेहरुको पनि दात पहेलो हुन्छ । तुलसी
एजेन्सी । महिनावारीको विषयमा कोहि पनि खुलेर कुरा गर्न चाहाँदैनन् । तर हरेक महिलाहरु महिनावारी हुनै पर्ने हुनाले यस सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ । सबैकुरा ठिक चलिरहेको भन्ने लागिरहँला पनि कहिले काहिँ कमजोरी अनुभव हुने तथा अनेक समस्या देखा पर्ने गर्दछ महिलाहरुमा । तपाईलाई थाहा छ यस्तो किन हुन्छ ? बास्तवमा यस्तो हाम्रो शरिरमा हर्मोनको सन्तुलन विग्रीनुको कारण देखापर्छ । र महिनावारीको समयमा यदि तपाईलाई अत्याधिक रगत बग्ने गर्दछ भने तपाईको शरिरमा हर्मोनको असन्तुलको कारण हुन सक्छ । तर डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन । केहि हेल्दी डाइट गरेर यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भने शरिरमा हर्मोनको असन्तुलन हुनबाट पनि जोगिन सक्नुहुन्छ । मेवा यसमा पपाइन एन्जाइम्स हुन्छ जसले रगत बग्ने समस्या कम गर्छ । आयुर्वेदमा पनि यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । उखूको जूस हप्तामा एकपटक उखूको जूस पिउने गर्नाले
नफाली राख्दा के हुन्छ जान्नुहोस्…पूरा पढ्नु होस ।
जति धेरै वीर्य फाल्यो त्यति नै स्वस्थ, यस्तो छ प्रोस्टेट ग्रन्थी र वीर्यको सम्बन्ध ्रकाठमाडौं( के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी समस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्याले सताउँछ रु यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलार्इ पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो । समयमै उपचार गरे सजिलै निको हुने यो रोगलाई बेवास्ता गरे क्यान्सर हुनसक्ने खतरा रहेको चिकित्सकहरू औल्याउँछन् । युरोलोजिस्ट डा दीपक रौनियारका अनुसार प्रोस्टेटसम्बन्धी रोगमा उपचार
क्यान्सर, मोटोपना र दम लाग्नै नदिन यो फल खानुहोस्
काठमाडौं । हाम्रो पृथ्वीमा सजिव प्राणीका अमृत बुटीहरुपनि छन् । त्यही अमृत बुटी मध्य किवि एक अति महत्वपूर्ण फल हो । यो फल अण्डा आकारको फल हो, जो बोटमा लहरामा झुण्डिएको शैलीमा फल्छ । बाहिर काँडा अर्थात झुस जस्तो हुन्छ भने काटेर हेर्दा हल्का हरियो रंगमा गुदी देखिन्छ । किविलाई उसिनेको आलु जसरी बोक्रा छोडाएर वा चम्चाले गुदी झिकेर खान सकिन्छ । गुणस्तरीय किवि न त धेरै गुलियो हुन्छ, न त धेरै अमिलो नै । यो निकै पोषिलो र औषधीय गुण समेत भएकाले यसको माग बढेको हो । किवि नियमित खानाले पाचन प्रणाली ठीक हुने, मधुमेह नियन्त्रण हुने, लामो समयसम्म जवान देखिने, भिटामिन सीको कमी पुर्ति गर्ने लगायतका फाईदाहरु दर्शाईएको छ । आजै जान्नुहोस् यो फलले के के कुरामा अचुक फाईदा पुर्याउँछ । यो अति उपयोगी सामाग्री सेयर गरौँ । किवि फल खानुका अन्य फाईदा यस्ता रहेका छन्ः मधुमेहका विरामीहरुका लागि उपयोगि कोलेस्टेरोल
पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका कारण मधुमेह, हर्ट अट्याक, किड्नी सम्बन्धी रोगीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढीरहेको छ । रागेलागेपछि विभिन्न औषधिहरुको प्रयोग गरिन्छ । तर, यस्ता रोग लागेको खण्डमा प्राकृतिक रुपमा पाइने केही खाद्य पदार्थहरुको प्रयोग गर्दा त्यसले थप फाइदा पुग्छ । मधुमेह भएका विरामीका लागि जामुन अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । यसले मधुमेहलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिने आयुर्वेदको दाबी छ । जामुनुको बाहिरी बोक्रा निकाल्नुहोस् र भित्रको वियालाई पिनेर धुलो बनाउनुहोस् । त्यसपछियो पाउडर जस्तो बन्ने छ ।हल्का तातो पानीमा मिसाएर यसलाई पिउनुस् यसले फाइदा दिन्छ । त्यस्तै अपचमा पनि यो अचुक उपचार हुन्छ । जामुनको
राति सुत्न भन्दा २ मिनेट अगाडी अनुहारमा यो लगाउने गर्नुस बिहान उठ्दा चकित हुनुहुनेछ…
हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर ,,गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन : १.यदि चर्को घाममा तपाईंको छालाको रङ फिक्का या कालो भएको छ भने काँचो टमाटरलाई मिचेर मोही हालेर अनुहार र छालामा लगाउनुहोस्, छालालाई शीतलता प्रदान हुनेछ र कालोपना पनि हट्नेछ। २.नुहाउने पानीमा एक गिलास लस्सी हालेर नुहाउनाले पनि बिस्तारै बिस्तारै सनटेन हट्नेछ । ३.एक सानो चम्चा काँक्राको रस, आधा चम्चा ग्लिसरिन र एक चम्चा गुलाबजल मिलाएर घामले डढेको छालामा लगानाले छाला नरम र गोरो हुँदै जानेछ। ४.टमाटर र दही बराबर मात्रामा लिएर राम्ररी फिट्नुस् र यो मिश्रणलाई छालामा लगाएर १० मीनेटसम्म राख्नुस र चिसो पानीले धुनुहोस् । यो सनबर्नको लागि र
काठमाडौ । धेरै मानिसको पेट मात्र बढेर अस्वाईदिलो ज्यान देखिएको हुन्छ । पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् । काँक्रो बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् । यो पेटका लागि धेरै लाभदायी छ । यो सेवनका कारण धेरै खाना खानबाट जोगिन सकिन्छ नै, यसले पेटको झाडुको काम पनि गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै बोसो कम हुन्छ । धनियाँको जुस यसमा क्यालोरी निकै कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ। एलोभेरा जुस एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा